कुखुरा संगै कागमा पनि बर्डफ्लु भेटियो ,, – Ranga Darpan
कुखुरा संगै कागमा पनि बर्डफ्लु भेटियो ,,
चैत २३ , काठमान्डौ – केहि दिनदेखि भक्तपुरमा बर्डफ्लु देखिएसंगै ललितपुर,, सर्लाही र मोरङका केही कुखुरा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भयको छ। तेस्तै कुखुरा संगै राजधानीको नारायणहिटी राजदरबार क्षेत्रका कागमा पनि बर्डफ्लु देखिएको छ ।
लैनचौरस्थित ब्रिटिस दूतावास र राहदानी विभाग क्षेत्रमा मरेका करिब २ सय कागमा बर्डफ्लु (एच५एन१) रहेको पुष्टि भएको हो । सरकारले विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनमा पठाएको प्रतिवेदनअनुसार कागहरू चैत ३ देखि मर्न थालेका थिए।
प्रयोगशाला परीक्षणबाट चैत ७ मा ती कागमा बर्डफ्लु (एच५एन१) रहेको पुष्टि भएको थियो। बाँसघारीमा गुड बनाएका करिब दुई सय कागको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बर्डफ्लु संक्रमणबाट मरेका उक्त कागबारे जानकारी संगठनको वेबसाइटमा समेत राखिएको छ।
राजधानीमा गतवर्ष र विगतमा पनि कागमा बर्डफ्लु देखिएको थियो। ‘यो वर्ष राजधानीका कागजस्ता जंगली पन्छी (वाइल्ड वर्ड) मा बर्डफ्लु देखियो,’ विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले भने, ‘परेवाको समेत मृत्यु भइरहेको छ तर हालसम्मको नमुना परीक्षणमा बर्डफ्लु देखिएको छैन।
’जंगली पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्न अत्यन्त अप्ठ्यारो हुने औंल्याउँदै डा. निर्मलले भने, ‘सकेसम्म मरेका पन्छीलाई सुरक्षित उपाय नगरी खुला हातले छुनु हुँदैन।
नेपालमा हालसम्म मानिसमा बर्डफ्लु नदेखिएकाले चिन्ताजनक अवस्था नरहेको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्क्रण महाशाखाका निर्देशक डा.विवेककुमार लालले बताए।
शुत्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा.शेरबहादुर पुनका अनुसार बर्डफ्लु पन्छीबाट मानिसमा संक्रमित हुने सम्भावना रहन्छ, यसैले फन्छीलाई रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई अतिरित्त सतर्कता अपनाउनुपर्छ। ‘बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रका बासिन्दाले पन्छीको दिसा, रगत वा कुनै पनि तरल पदार्थ छुनबाट बच्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
मुलुकमा सबैभन्दा पहिले सन् २००९ मा झापामा बर्डफ्लु देखिएको थियो। पछि विस्तारै संक्रमण विभिन्न जिल्लामा देखिन थालेको हो। छिमेकी भारतमा सन् २००६ मा पहिलो पटक बर्डफ्लु देखिएको थियो।
यस्तो रोगबाट बच्न राम्रो संग नपाकेको चिज अण्डा ,मासु नखाना डाक्टरको सल्हा छ। श्वासको समस्या, मांसपेशीमा दुखाइ, खोकी, ज्वरो आदि अनुभव भयमा तरुन्त स्वाथ्यकर्मीलाई देखौन हुन चिकित्सक बताउछन।
दाल भात तरकारी मोफसल टुरमा ,,
कर्णालीमा बाढी पहिरोबाट यात्रु अलपत्र ,,